Mani Lohani | Nepali Stories
Mani Lohani – Tumen Ko Kinarma
मणि लोहनी – ट्युमेनको किनारमा
‘ऊ त्यही हो उत्तरकोरिया । जहाँ हाम्रा मित्रहरू पक्राउ परेका थिए ।’ चीन र उत्तरकोरियाको सीमामा रहेको ट्युमेन नदीको बीचमा पुगेपछि लाराले भनिन् । लारा अमेरिकी नागरिक हुन् । लामो समयदेखि उनी एक अन्तर्राष्ट्रिय मानवअधिकारवादी संस्थामा कार्यरत छिन् । अहिले उनको क्षेत्र यही हो । चीन र उत्तरकोरियाको सिमाना ।
पोङयाङ अदालतको फैसलाको तीन महिनापछि अमेरिकी एक संस्थाले दक्षिण एसियाका पत्रकारहरूको टोलीलाई ट्युमेन नदी किनारमा पुर्याायो । पाकिस्तान, श्रीलङ्का, भारत र नेपालका पत्रकारहरू सम्मिलित त्यो टोलीमा म पनि थिएँ । र मेरो साथमा थियो, क्यामरामेन अशोक सिलवाल ।
‘यही नदी किनारले लोभ्यायो हामीलाई ।’ जिङ लि सुनले भनिन्, ‘उत्तरकोरियाको यो कुनामा हामीसँग दुःख र अभाव मात्रै छ । चीन हाम्रो लागि स्वप्नदेश हो । त्यहाँ काम र दाम दुवै छ । त्यही भएर उमेरले तन्नेरी नेटो नकाट्दै हामी ट्युमेन तर्न हतारिन्छौँ ।’
‘हाम्रो लोभ र हतारले हामीलाई यही ट्युमेनको किनारमा डुबाई दियो ।’ जिङ लगभग रोइसकेकी थिइन्, ‘अब हामीसँग हाम्रो जीवन रहेन ।’ लाराले हामीसँग परिचय गराएकी यी महिलालाई लाराकै संस्थाले उद्धार गरेको रहेछ ।
‘ट्युमेन नदी तरेपछि हामी चीनको एक घरमा आइपुग्यौँ ।’ जिङले उत्तरकोरिया छोड्दाको क्षण सम्भिmन्, ‘त्यो परिवारले हामीलाई स्वागत गर्योय । उनीहरूको कुराले मैले काम पाउँछु भनेर खुसी पनि लागेको थियो ।’
तर काम मिलाई दिनुभन्दा त्यो चिनियाँ परिवारले जिङलाई मानव तस्करको जिम्मा लगाई दियो । तस्करले एक चिनियाँ किसानसँग मोटो रकम लिएर जिङलाई बेचिदियो । जिङले आˆनो इच्छाविपरीत त्यो किसानसँग बिहे गर्नुपर्योो ।
‘मेरो चिनियाँ श्रीमान् मभन्दा १५ वर्ष जेठो थियो र उसको एउटा खुट्टा चल्दैन थियो । त्यसबेलादेखि नै म उसको दासी भएकी हुँ । उसले भनेको मानेन भने मलाई कुट्थ्यो ।’ गुलाफकै पत्रजस्ता पातला जिङका ओठ थरर्र कापेँ ।
घरेलु हिंसा र गरिबीका कारण भाग्ने दसौँ हजार उत्तरकोरियाली महिलाको कथा पनि जिङको जस्तै रहेको लाराले बताइन् । उनले बताएअनुसार महिलाहरू आफैँ चीनसम्म पुग्दा रहेछन् र अपहरणमा पर्दा रहेछन् । चिनियाँ व्यापारीहरू पनि उत्तरकोरियामै गएर त्यहाँका व्यापारीको सहयोगमा केटीहरू फसाउँदा रहेछन् । ‘हामीसँग तपाइँको छोरीका लागि सीमापारिको गाउँमा निक्कै राम्रो काम छ । उनले तलब पाउँछिन् र तपाइँलाई पैसा पठाउन सक्नेछिन्’ भन्दै झुक्याउँदा रहेछन् ।
आधुनिक युगको यो दासप्रथाबाट विक्षिप्त महिलाहरूलाई सहयोग गर्दै चीन र उत्तरकोरियाको सिमानामा चार वर्ष बिताइसकेकी लाराले भनिन्, ‘व्यापारीले पसलमा सामान सजाएझैँ हुन्छ । महिलाहरूलाई लहरै राखिन्छ । उमेरअनुसार मिलाइन्छ । मेकअप र राम्रा लुगामा सजाएपछि मान्छेहरूले मोलतोल गर्न थाल्छन् । सबैभन्दा बढी मोल जसले दियो उसैले रोजेको महिला पाउँछ । ती महिलालाई पहिले तस्करले बलात्कार गर्छन् । त्यसपछि बाँचुन्जेल किन्ने मान्छेको यौनदासी बन्नुपर्छ ।’
‘उत्तरकोरिया नर्फकने ?’ म जिङलाई सोध्छु ।
‘ट्युमेन पार गर्न निक्कै दुःख गरियो र यहाँसम्म आइयो । यहाँ पनि दुःख मात्र पाइयो । फेरि दुख्ख नै लिएर किन
फर्किनु ? अब यतै मर्ने’ उनले आँसु पुछिन् । आफैँसँग आˆनै भाषामा बोलिन् -सुस्तरी, ‘साल्याजुनुङ्गो आन्न साल्याजुनुङ्गो मुग्रेस्सोनिकान् ।’
‘के भनेको यो ?’ मैले लारालाई सोधेँ ।
‘यो जिङको थेगोजस्तै नै हो । आˆनो जीवनका बारेमा बोल्नुपर्योफ कि उनी सधैँ यसै भन्छिन् । उनको यो कोरियन लबजको अर्थ हुन्छ- हामी बाँचेको नबाँचेको केही थाहा छैन ।’
कस्तो दार्शनिक शैलीको जवाफ । सायद पीडाले मानिसलाई दर्शनको नजिक पुर्याहउँछ । मलाई यो वाक्य पहिले कतै सुने जस्तो लाग्छ । सम्भिmने कोसिस गर्छु । कोरियाली लवजमा नै मैले यो वाक्य यसैगरि कतै सुनेको छु । एक कोरियाली किशोरीबाट ।
‘जिङ, तिमी नेपाल आएकी छौ ?’
‘के तिमी नेपाली हौ ?’ उनले मलाई सोधिन् । जिङको यो लवजमा म उनलाई ठम्याउँछु, ‘हो, म नेपाली हुँ । राप्तीको किनार र उडेका चराहरू याद छ, तिमीलाई ? त्यही चराहरू देखेर एक शीतल साँझ तिमीले वाङलाई सम्झेकी थियौ ।’ म रोमाञ्चित हुन्छु, जिङसँगको भेटले । यो कस्तो संयोग ।
‘तिम्रो वाङ, कम्पनीमा तिमीलाई काम खोजिदिने वाङ । तिम्रो धनी हुने सपना । मलाई सब याद छ, जिङ ।’
‘तिमी त्यो मसँग नाच्ने झ्याप्पुले केटा हौ ?’ उनी डर र खुसीले एकसाथ चिच्याउँछिन् ।
सौराहामा बेच्न राखेको नेपालको नक्शा भएको टिसर्ट उनले खुब मन पराएकी थिइन् । मैले किनेर लैजाउ न त भन्दा उनले निरीह स्वरमा भनेकी थिइन्, ‘मसँग पैसा छैन ।’
‘किन ?’ मैले सोधेथेँ ।
‘म चीनको सीमा नजिकैको एक कोरियाली गरीब किसानकी छोरी हुँ । मसँग पैसा छैन । पढाइ राम्रो थियो र यहाँसम्म घुम्न आउन पाएँ ।’
‘बाँच्ने क्रममा गरिबीसँग हामीले ट्युमेनको किनारमा मृत्यु साँटिरहेका छौँ ।’ उनी आफैँसँग बोलेकी थिइन्, ‘साल्याजुनुङ्गोयो आन्न साल्याजुनुङ्गोयो मुग्रेस्सोनिकान् ।’ मैले त्यति नै खेर त्यसको अर्थ सोधेको थिएँ । कोरियन त्यो बोलीको नेपाली अनुवाद यस्तो हुँदो रहेछ- हामी बाँचेको नबाँचेको केही थाहा छैन ।
‘तर अब केही महिनामै म धनी हुन्छु ।’ उनी केही उज्याली भएकी थिइन्, ‘म छिट्टै वाङ लिसँग बिहे गर्दैछु र जोनचुङमा सर्दैछु । त्यहाँ उसले आˆनै काम भएको कारखानामा मेरो लागि काम खोजिदिइसकेको छ ।’
त्यसपछि मैले उनले मन पराएको टिर्सट तीनवटा किनिदिएको थिएँ । एउटा उनको लागि, अर्को वाङको लागि र अर्को एउटा सानो टिर्सट भविष्यमा उनीहरूबाट जन्मने बच्चाका लागि । मेरो दुवै हात उनले ‘खाम्सामिदा’ भनेकी थिइन् । खाम्सामिदा भनेको धन्यवाद रहेछ । कोरियनहरूले आˆनो पि्रय मानिसलाई धन्यवाद भन्नुपर्योो भने दुवै हात समातेर खाम्सामिदा भन्ने गर्दारहेछन् ।
‘तिमीसँग यसरी यहाँ भेट हुन्छ मैले सोचेकी थिइन ।’ जिङ रुन थालिन्, ‘तिमीले किनिदिएको तीनवटै टिसर्ट त्यत्तिकै छ । अहिलेसम्म कसैले लगाएको छैन ।’
‘वाङसँग तिम्रो बिहे भएन ?’
जोनचुङमा सन् २००१ को अन्तिमतिर आएको भीषण पहिरोमा वाङले काम गर्ने गरेको कम्प्ानीलगायत सयौँ घर पुरिएछ र त्यही पहिरोले बगाएछ जिङको प्रेमी वाङ लीलाई…..जिङको सपना र रहरहरूलाई ।
पहिरोले बगेको सपनाको पीडादायी सम्झना लिएर उनी सन् २००२ मा चीन छिरेकी रहिछिन् – काम र माम खोज्दै ।
निकै पछि उनी केही शान्त र स्वाभाविक देखिइन् । बेलुका ट्युमेनको किनारमा बसेर हामीले सँगै कफी पियौँ । उनी मेरो नजिकै आइन्, ‘तिम्रो त्यो झ्याप्पुले कपाल खोई त, मणि ?’
‘उमेरको पहिरोले बगायो नि, जिङ ।’ ट्युमेन नदीमाथि उडेका चराहरू हेर्दै मैले भनेँ ।
Posted in Mani Lohani
Tagged Literary work of Nepali Story Writer Mani Lohani Literatures of Nepali Story Writer Mani Lohani Mani Lohani - Tumen Ko Kinarma Mani Lohani's Nepali Story Tumen Ko Kinarma Nepali Author Mani Lohani Nepali Katha Nepali Katha Tumen Ko Kinarma by Mani Lohani Nepali Kathakar Nepali Kathakar Mani Lohani Nepali Rachanakar Kathakar Mani Lohani Nepali Sahitya Nepali Sahityakar Nepali Stories Nepali Stories By Mani Lohani Nepali Stories Collection Nepali Stories Collection Of Mani Lohani Nepali Story Nepali Story Blog Nepali Story Tumen Ko Kinarma by Mani Lohani Nepali Story Website Nepali Story Writer Nepali Story Writer Mani Lohani Sahityakar Mani Lohani Ka Nepali Katha Haru